Kulanka Barcelona ay Ceyriso Tabare Ronald Koeman oo la ogaaday | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Kulanka Barcelona ay Ceyriso Tabare Ronald Koeman oo la ogaaday
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay ceyriso Ronald Koeman ka dib kulankooda La Liga ay la ciyaarayaan kooxda heysata horyaalka ee Atletico Madrid .
Blaugrana ayaa xilli ciyaareedka cusub ku bilaabatay guuldarro la’aan laakiin waxaa laga dhaliyay lix gool wax gool ahna kamay dhalin Champions League ilaa hadda, waxaana ugu dambeeyay guuldarro 3-0 ah oo ka soo gaartay Benfica horraantii toddobaadkan.
Mustaqbalka Koeman ayaa hawada sare ku jiray tan iyo dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore, inkasta oo kooxda Barcelona lynchpin Frenkie de Jong aysan rumaysnayn in cayrinta tababaraha reer Holland ay tahay xalka.
Si kastaba ha ahaatee, Daily Mail ayaa werineysa in Joan Laporta uu qarka u saaran yahay inuu ceyriyo Koeman si kasta oo ay noqoto natiijada ciyaarta Sabtida, taasoo tababarihii hore ee Netherlands.
Warka ayaa intaas ku daraya in Roberto Martinez uu yahay musharraxa hoggaaminaya macalimiinta la doonayo, laakiin kooxda ayaa loo oggolaan doonaa oo kaliya inay ku bixiso 3.3 milyan oo ginni si ay u shaqaaleysiiso macallin cusub iyo koox tababare.
Andrea Pirlo iyo Xavi ayaa sidoo kale lala xiriiriyay shaqada tababaraha, laakiin tababarihii hore Luis Enrique ayaa meesha ka saaray suurtogalnimada inuu mar kale qabto xilka.
Koeman ayaa badiyay 37 ka mid ah 57 kulan oo uu leyliyey Barcelona, ​​kooxdiisa ayaana haatan ku jirta kaalinta lixaad ee kala sarreynta La Liga kaddib lix kulan oo ay ciyaartay xilli ciyaareedkan.
Previous articleXiddiga Liverpool ee Trent Alexander-Arnold oo ka maqan kulanka Manchester City
Next articleTimo Werner oo ka fikiraya mustaqbalka Chelsea